How to give tooth brushing to kids when getting teeth? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
How to give tooth brushing to kids when getting teeth?
သားသားမီးမီးတို့ သှားစတငျပေါကျလာတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျလိုသှားတိုကျပေးရမှာပါလဲ
ပုံမှနျအားဖွငျ့ အသကျ ၆လဝနျးကငျြလောကျမှာ ကလေးသှားလေးတှေ စတငျပေါကျလာတတျပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာစပွီး နူးညံ့တဲ့ အမြှငျလေးတှပေါတဲ့ ကလေးသှားတိုကျတံလေး (မိဘတှရေဲ့လကျမှာစှပျလို့ရတဲ့ ကလေးသှားတိုကျတံအမြိုးအစားလေးလဲရှိ) မှာ ဖလူအိုရိုကျဒျပါတဲ့ ကလေးသှားတိုကျဆေးလေး (ဆနျစအေ့ရှယျလောကျထညျ့ပွီး) သှားတိုကျပေးသငျ့ပါပွီ။ သှားတိုကျတဲ့အခါ သှားကိုသာမက သှားဖုံးသားလေးတှကေိုပါ အသာအယာတိုကျပေးသငျ့ပါတယျ။ နှဈခြောငျးယှဉျပေါကျလာတဲ့အခါကရြငျတော့ သှားကွားပှတျကွိုး (Dental Floss) လေးသုံးပွီး သနျ့ရှငျးရေးပွုလုပျပေးသငျ့ပါတယျ။
အထူးသတိထားရမှာတော့ ကလေးငယျတှကေို ညဘကျ နို့ဘူးတိုကျပွီး မအိပျစခွေငျးပါပဲ။ ကလေးတှကေို ညဘကျနို့ဘူးတပျလကျြသား အိပျပြျောစခွေငျးက နိျု့ပိုးစားတယျဆိုတဲ့ ကလေးသှားလေးတှေ ပိုးစားပကျြစီးခွငျးကိုဖွဈစတေဲ့ အဓိက တရားခံပါ။ နို့ထဲမှာပါတဲ့သကွားဓာတျက ကလေးသှားတှကေို ပိုးစားပကျြစီးစနေိုငျပါတယျ။
အသကျသုံးနှဈဝနျးကငျြနဲ့အထကျ ကလေးငယျတှကေို ဖလူအိုရိုကျဒျသှားတိုကျဆေး (ပဲစခေ့နျ့ပမာဏ)နဲ့ သှားတိုကျပေးသငျ့ပါပွီ။ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အသကျခွောကျနှဈထိကို သှားတိုကျနခြေိနျမှာ သခြောစောငျ့ကွညျ့ပွီး စနဈမှနျသှားတိုကျနညျးကို သခြောသငျကွားပွသပေးသငျ့ပါတယျ။ အဲ့အရှယျကလေးငယျတှဟော သှားတိုကျဆေးကို ကောငျးကောငျးမထှေးတတျသေးတာတို့ မြိုခတြတျတာတို့လဲ လုပျတတျတာမို့ သခြောလေးဂရုတစိုကျနဲ့ သှားတိုကျတာကို စောငျ့ကွညျ့ပေးသငျ့ပါတယျ။ မနကျစာစားပွီးခြိနျနဲ့ ညအိပျရာမဝငျခငျ သှားတိုကျဖွဈတာ သခြောရဲ့လားဆိုတာရော တဈခါတညျး စဈဆေးရငျးနဲ့ပေါ့။
ကလေးငယျအမြားစုဟာ ညဘကျအိပျခငျြဇောရယျ ပငျြးတာရယျ ပေါငျးပွီး ညဘကျသှားတိုကျတာကို ပကျြကှကျတတျကွပါတယျ။ ကွာလာတော့ အကငျြ့ပါပွီး ညဘကျကို သှားမတိုကျဖွဈတော့ပါဘူး။ ညဘကျသှားမတိုကျဘဲ အိပျရာဝငျတာဟာ ဒီနိုငျငံမှာ သှားပိုးစားရခွငျးရဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ညဘကျသှားတိုကျတာဟာ မနကျဘကျသှားတိုကျတာထကျ ပိုအရေးကွီးတာကွောငျ့ ဖဖေမေမေတေို့အနနေဲ့ မိမိတို့သားသားမီးမီးတို့ကို ညဘကျသှားတိုကျတတျတဲ့အကငျြ့ရအောငျ သခြောလေးဂရုတစိုကျ သငျကွားပေးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
သားသားမီးမီးတို့ သွားစတင်ပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုသွားတိုက်ပေးရမှာပါလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၆လဝန်းကျင်လောက်မှာ ကလေးသွားလေးတွေ စတင်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီး နူးညံ့တဲ့ အမျှင်လေးတွေပါတဲ့ ကလေးသွားတိုက်တံလေး (မိဘတွေရဲ့လက်မှာစွပ်လို့ရတဲ့ ကလေးသွားတိုက်တံအမျိုးအစားလေးလဲရှိ) မှာ ဖလူအိုရိုက်ဒ်ပါတဲ့ ကလေးသွားတိုက်ဆေးလေး (ဆန်စေ့အရွယ်လောက်ထည့်ပြီး) သွားတိုက်ပေးသင့်ပါပြီ။ သွားတိုက်တဲ့အခါ သွားကိုသာမက သွားဖုံးသားလေးတွေကိုပါ အသာအယာတိုက်ပေးသင့်ပါတယ်။ နှစ်ချောင်းယှဉ်ပေါက်လာတဲ့အခါကျရင်တော့ သွားကြားပွတ်ကြိုး (Dental Floss) လေးသုံးပြီး သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အထူးသတိထားရမှာတော့ ကလေးငယ်တွေကို ညဘက် နို့ဘူးတိုက်ပြီး မအိပ်စေခြင်းပါပဲ။ ကလေးတွေကို ညဘက်နို့ဘူးတပ်လျက်သား အိပ်ပျော်စေခြင်းက နို့်ပိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ ကလေးသွားလေးတွေ ပိုးစားပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိက တရားခံပါ။ နို့ထဲမှာပါတဲ့သကြားဓာတ်က ကလေးသွားတွေကို ပိုးစားပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အသက်သုံးနှစ်ဝန်းကျင်နဲ့အထက် ကလေးငယ်တွေကို ဖလူအိုရိုက်ဒ်သွားတိုက်ဆေး (ပဲစေ့ခန့်ပမာဏ)နဲ့ သွားတိုက်ပေးသင့်ပါပြီ။ သားသားမီးမီးတို့ရဲ့အသက်ခြောက်နှစ်ထိကို သွားတိုက်နေချိန်မှာ သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး စနစ်မှန်သွားတိုက်နည်းကို သေချာသင်ကြားပြသပေးသင့်ပါတယ်။ အဲ့အရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာ သွားတိုက်ဆေးကို ကောင်းကောင်းမထွေးတတ်သေးတာတို့ မျိုချတတ်တာတို့လဲ လုပ်တတ်တာမို့ သေချာလေးဂရုတစိုက်နဲ့ သွားတိုက်တာကို စောင့်ကြည့်ပေးသင့်ပါတယ်။ မနက်စာစားပြီးချိန်နဲ့ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် သွားတိုက်ဖြစ်တာ သေချာရဲ့လားဆိုတာရော တစ်ခါတည်း စစ်ဆေးရင်းနဲ့ပေါ့။
ကလေးငယ်အများစုဟာ ညဘက်အိပ်ချင်ဇောရယ် ပျင်းတာရယ် ပေါင်းပြီး ညဘက်သွားတိုက်တာကို ပျက်ကွက်တတ်ကြပါတယ်။ ကြာလာတော့ အကျင့်ပါပြီး ညဘက်ကို သွားမတိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ညဘက်သွားမတိုက်ဘဲ အိပ်ရာဝင်တာဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ သွားပိုးစားရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ညဘက်သွားတိုက်တာဟာ မနက်ဘက်သွားတိုက်တာထက် ပိုအရေးကြီးတာကြောင့် ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ မိမိတို့သားသားမီးမီးတို့ကို ညဘက်သွားတိုက်တတ်တဲ့အကျင့်ရအောင် သေချာလေးဂရုတစိုက် သင်ကြားပေးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
Suppository and Children